PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - BANGIBIZA NGOMTHAKATHI
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Izindaba -
ne nawe kulobu buhlungu obuzwayo obuzwiswa ngabantu ozalwa nabo, abantu begazi lakho.
Kuzwela kakhulu uma uzwiswa ubuhlungu ngabantu basekhaya. Asingalibalekeli-ke iqiniso lokuthi kuwumkhuba wasemindenini yethu ukuthi mhlazane ungasasebenzi, ungasenasenti bese uphenduka into engaziwa nokuthi iyini.
Lena ngenye yezinto esikhula ngazo empilweni, ezisiqinisa ukhakhayi. Emakithi yilapho siqeqeshwa khona. Okusemqoka wukuba sizame ukuthi kuyona yonke into esehlelayo ekhaya, singababambeli amagqubu ngoba abantu bakini bayohlala bengabantu bakini, akushintshi lokho.
Unkulunkulu uyokubusisa ngokungababambeli igqubu abantu bakini, futhi nabo bayozisola mhlazane esekuphendulela. Unkulunkulu ungunkulunkulu wesikhathi, akakaze afike sekwedlule isikhathi, nawe uyokuhambela babe namahloni kodwa ungababambeli igqubu. mlobola ekubeni engangithandi ngokweqiniso?
IMPENDULO: Noma kubuhlungu kodwa asiqale sikubongele ngokuthi usheshe wayibona inyoka isavele ngekhanda emgodini.
Sengathi kungenzeka nakwabanye ukuba basheshe bayibone isavele ngekhanda. Ngikubongela ngoba abaningi lobu buhlungu obuzwayo babuzwa sebelobolene baze bashada.
Wena unenhlanhla ngokuthi unkulunkulu asheshe akwembulele bese ukwazi ukuzithathela isinqumo sokuthi ngoba lesi sicathulo siyakumpintsha, uzoqhubeka yini usigqoke.
Kunezinto okungafuneki nje uze uzibuze kwabanye abantu, okufanele uzibuze wena ngazo futhi uzithathele wena izinqumo. Ungamloboli umuntu okuhlukumezayo futhi ungavumi ukulotsholwa ngumuntu okuhlukumezayo. PASTOR, ngingabaxolela yini abantu abangibiza ngomthakathi besho nokuthi abangidingi kubo?
IMPENDULO: Ngesinye isikhathi impilo ike ikubuze ukuthi ukhule kangakanani. Mhlawumbe nje ake ngithi ngesinye isikhathi impilo ike idinge ukuba ukhombise ukuqina kokhakhayi noma ukukhula komqondo.
Ngiqonde ukuthi kuwena akufuneki kuzwele kakhulu kithina ukuthi abantu basibize ngezinto esingezona kodwa-ke kungazwela uma bethunuka ikhona.
Iqiniso liyohlala livela eku- gcineni, yonke into abantu abakubize ngayo ubokhululeka uma ungeyona kodwa ushaywe wuvalo uma uyiyona ngoba iqiniso liyovela ekugcineni. Uma kuyibona abathakathi kuyovela kanti noma kunguwena kuyovela futhi.
Uma kukhona into ophezu kwayo empilweni fana nombhidisi - umuntu obhidisa ikhwaya, ubuka ikhwaya yakhe bese izihlwele azifulathele, azikhombise umhlane.
Ngiyafisa yonke into esiyenzayo singalokhu sibuka futhi silalela ukuthi abantu bathini, silokhu siphendulana nabo, yenza into oyenzayo, ukhohlwe ngabantu.
Kubo bonke abafundi bephephandaba lethu ILANGA, siyafisa ukuba sisizane futhi ngiyafisa ukuniphendula nonke kepha ngebhadi ucingo noma inombolo iyodwa ngakho akulula ukunibamba nonke.
Uma ufona uyizwa ikhala, ngesinye isikhathi ngisuke ngisakhuluma nomunye. Nixole kuleyo ndawo kodwa ngokushiya nje umqhafazo, siyakubeka nasemkhulekweni.
*Upastor Sthembiso Zondo ngumeluleki nomethuli wezinkulumo ezakhayo. Wethula inkulumo ekhuthazayo ngolwesine bese ephendula imibuzo yabafundi ngezinkinga zempilo nezothando KWILANGA Langesonto.
Abafuna ukuxhumana naye noma ukummema, inombolo ithi: 073 795 2292.
Ungamshiyela nomyalezo kufacebook: Sthembiso Zondo Fan page noma kuwhatsapp: 082 070 8034.
Abafisa ukukhonza nathi, bazosithola njalo ngesonto ngo-10h00 ejewish Hall.
Uma udinga ama-directions thumela ISMS ku: 078 419 1024